Afindrafindrao. Ny afindrafindrao dia dihy malagasy vokatry
ⓘ Afindrafindrao. Ny afindrafindrao dia dihy malagasy vokatry ny fakan-tahaka ny dihy vazaha atao hoe quadrille izay dihiezina aminny mozika malagasy, matetika ta ..
Ny akanga dia vorona mitovitovy endrika sady iray karazana aminny akoho sy ny vorombola, fa izy somary kely loha sady manana volo mainty mipentipentina fotsy. Maro karazany ny akanga ka ny sasany fiompy fa sasany hafa akangadia. Miara-monina sy miara-mandeha ny akanga, ary tia mandeha sy mihazakazaka aminny tany na dia afa-manidina soa aman-tsara aza. 40 hatraminny 72 sm ny habeny ary fohy sady miondrika ny rambony. Misy dongona somary maranitra sady mafy ny tampon-dohany. Ompianny olona mba hatao haingon-tanàna ny akanga nefa koa azo ompiana mba ho hanin-kena. Ao Afrika izay tany fiaviany ...
Ny afindrafindrao dia dihy malagasy vokatry ny fakan-tahaka ny dihy vazaha atao hoe quadrille izay dihiezina aminny mozika malagasy, matetika tanterahinolo-maro mandeha tsiroaroa, lahy sy vavy, ka ny vavy eo aloha fa ny lahy ao aoriana mihazona ny tananny vavy toa mampiana-mandeha azy. Taminny vanimpotoana faha mpanjaka dia dihinny tandapa ny afindrafindrao, ankehitriny ny lanonanny Malagasy lazaina fa "mahalala" rehetra dia tsy maintsy manomboka aminny afindrafindrao,na eto Madagasikara na any ivelany.
Ny zavamaneno ampiasaina indrindra taminizany fotoana izany dia ny angorodao sy ny harmonia.
Taminny taonjato faha-19, taminny fahatongavanny Eorôpeana dia nandray ny kolontsainireo vahiny ireo ny Malagasy nefa tsy nanary ny kolontsainy fa nampifangaro ny singa sasany aminizany. Aminny lanonana toy ny Alahamadibe no nanehoanny Vazaha dihy vovao atao hoe quadrille izay nalainny Malagasy tahaka ka izany no lasa dihy afindrafindrao. Taty aoriana dia tsy ny saranga ambony ihany no nandihy afindrafindrao fa ny vahoaka iray manontolo tao Imerina. Nandritra ny fanjanahantany dia tsy dia nisehoseho loatra ny mpandihy afidrafindrao. Ny kolontsaina tianny mpanjanaka hanjaka taminizany dia ny anny Frantsay. Na dia teo aza izany fanjakanny kolontsaina tandrefana izany dia tsy nanjavona ny afindrafindrao fa niery tany ho any. Hany ka taminny fahazoanny Madagasikara ny fahaleovan-tena dia ny afindrafindrao no lasa dihy fanokafana ny ankamaroanny lanonana.
2. Fandihizana ny afindrafindrao
Izany dihy izany dia tanterahinolon-droa lahy sy vavy, mampidoladola loha ankavia sy ankavanana. Alefa miankavia avy eo miankavanana manaraka gadona ny tongotra havia sy havanana, ny vehivavy eo aloha fa ny lehilahy avy ato aoriana mihazona ny tananny vehivavy, toa mampiana-mamindra zazakely. Maro ny mpandray anjara miaraka ka manao lahara-manjohy lava miendrika faribolana. Ny mozika dihizina aminny afindrafindrao dia mitovitovy aminny mozika fandihizanny Betsimisaraka. Tsy ny lanonana rehetra mantsy no anaovana io dihy io. Aminny forazaza sy ny famadihana ary ny fandevenana, ohatra, dia dihy hafa no atao fa tsy ny afidrafindrao.